रुपन्देहीमा कोभिड–१९ संक्रमण दर घट्दैं, तीन गुणा बढी संक्रमणमुक्त - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ लुम्बिनी प्रदेश ∕ रुपन्देहीमा कोभिड–१९ संक्रमण दर घट्दैं, तीन गुणा बढी संक्रमणमुक्त
रुपन्देहीमा कोभिड–१९ संक्रमण दर घट्दैं, तीन गुणा बढी संक्रमणमुक्त
डी. आर. बन्जाडे आईतबार, २०७८ जेठ ९ गते, १०:११ मा प्रकाशित
बुटवल–लुम्बिनी प्रदेशमा कोभिड–१९ संक्रमण उच्च रहेको रुपन्देहीमा पछिल्लो समय संक्रमित हुनेको संख्या घट्दै गएको छ । दैनिक एक हजारको हाराहारीमा कोभिड–१९ संक्रमित रहेको रुपन्देहीमा पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या झन्डै डेढ सयमा सिमित हुन थालेको हो ।
जिल्लामा कोभिड–१९बाट संक्रमित हुनेभन्दा संक्रमण जित्नेहरुको संख्या तेब्बर हुन थालेको छ । जिल्ला स्वास्थय कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार १ सय ६७ संक्रमित हुँदा ५ सय ३१ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको छ । यो संख्या संक्रमितको तीन गुणा भन्दा बढी हो ।
कोभिड–१९ संक्रमणको दोस्रो लहरले निकै प्रभावित भएको रुपन्देहीमा मृत्यु हुने दरमा पनि कमी देखिएको छ । दोस्रो लहरसँगै बैशाख ९ गते ६८ जनामा कोभिड–१९ संक्रमण देखिएको रुपन्देहीमा बैशाख २९ गते संक्रमितको संख्या ९ सय ७ पुगेको थियो ।
केही दिनयता भने संक्रमित थपिने दरमा कमी आएर आइतबार २ सयभन्दा कममा झरेको हो । यता संक्रमितभन्दा संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या पनि जेठ महिनाको सुरुवातदेखि बढ्दै गएकोले सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि घटदै गएको छ ।
जिल्लामा संक्रमितको संख्यामा मात्र कमी आएको छैन । पछिल्लो समय परीक्षण दरमा समेत कमी भएको छ । परीक्षण कम हुँदा संख्या घटे पनि संक्रमणको जोखिममा भने कमी नआएको चिकित्सकहरु बताउँछन् । ‘संक्रमणको दरमा केही कमी जस्तो देखिएपनि जोखिम कम भएको छैन्,’ डा. सन्तोष भूषाल भन्छन्, ‘केही सुखद् संकेत देखिएका छन् । अझै सचेत रहनु आवश्यक छ ।’
परीक्षण गराएकामध्ये झन्डै ५३ प्रतिशतसम्म कोभिड–१९ पोजेटिभ देखिने गरेको रुपन्देहीमा हाल त्यो दर घटेर २५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
रुपन्देहीमा मृत्युदरमा समेत कमी आएको छ । दिनमा १३ जनासम्म मृत्यु हुने रुपन्देहीमा पछिल्लो २४ घण्टामा कोभिड–१९ बाट दुई जनाको मृत्यु भएको छ । हालसम्म रुपन्देहीमा मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या ३ सय ८८ पुगेको छ ।
हाल जिल्लामा ३ सय ३६ जनामा लक्षण देखिएकोले अस्पतालमा उपचाररत छन भने ४ हजार ८ सय ५८ जना होम आइसोलसनमा रहेका छन् ।